Ny dingan'ny fananganana kilema fampidirana amin'ny fanariana epc | Yingyi
Ny dingan'ny fananganana kilema amin'ny fanariana epc
1 Fampidirana kilema amin'ny epc casting
Ny tsy fahampian'ny fampidirana amin'ny casting epc dia tena mahazatra. Ny tsy fahampian'ny fampidirana amin'ny casting epc dia matetika mampihena ny fananan'ny castings. Mandritra izany fotoana izany, noho ny endrika tsy ara-dalàna ny fampidirana, dia mety hiteraka triatra na triatra mihitsy aza ny castings mandritra ny fanompoana. Ny tsy fahampian'ny fampidirana dia tsy mampihena ny fananana fanariana, fa manatsara ny hamafin'ny fanariana eo an-toerana ihany koa noho ny lesoka amin'ny tany, izay mety hitarika amin'ny machining matevina, misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny fanapahana sy ny fahasimban'ny fitaovana. Ny tsy fahampian'ny fampidirana amin'ny fanariana epc dia amin'ny ankapobeny tsy ara-dalàna miaraka amin'ny hakitroky ny fampidirana sy ny porosity tsy mitovy, fantatra amin'ny anarana hoe porosity slag.
1.1 Ny endriky ny tsy fahampian'ny fampidirana ao epc casting
Ny tsy fahampian'ny fampidirana epc casting dia slag, porosity slag ary fampidirana fasika. Ny endriky ny kilema dia matetika isan-karazany, ny sisiny endrika dia tsy ara-dalàna, ny habeny dia samy hafa, ao amin'ny cluster fizarana, slag sy slag pores amin'ny ankapobeny mainty sy volondavenona, loko dia samy hafa alokaloka. Misy akora vovoka ao amin'ny lavaka misy kilema, na metallurgique tsy ara-dalàna ao amin'ny ranon-javatra metaly, na sisa tavela amin'ny pyrolysis amin'ny fitaovana mitovy amin'izany, na hoso-doko amin'ny akora vovoka volondavenona tsy ara-dalàna na mahazatra.
1.2 Fampidirana ampahany mora very fanariana bobongolo
Ny fampidirana ao amin'ny casting bobongolo very dia mora mitranga, ary misy fitsipika sasantsasany mifanaraka amin'ny rafitra fanariana samihafa, fananganana bobongolo, teknolojia famokarana ary fepetra. Ny anton'ny fananganana dia mifandraika amin'ny votoatin'ny sisa tavela amin'ny metaly ranoka, ny dingan'ny fanerena ratsy, ny fikorianan'ny metaly ary ny dingan'ny fanamafisana ny fanariana. Ho an'ny fanariana vy misy rindrina manify miaraka amin'ny fanoherana ny hafanana, ny fanoherana ny fanoherana sy ny fanoherana ny harafesina, ny porosity na ny lesoka lavaka dia mora mitranga, indrindra amin'ny ampahany mifandray amin'ny vavahady na riser. Ny ampahany mifandray amin'ny dingan'ny famenoana fanariana fanariana, ny fikorianan'ny fotoana maharitra, mba hitazonana ny fotoana hafanana dia lava kokoa, ny vy ranon-javatra manary ny hafanana be loatra, ny fitaovana fanariana ampahany, misintona entona bebe kokoa amin'ny vy rano ary ampidirina amin'ny fanakanana. fanangonan-karena, vy miendrika fampangatsiahana sy solidification shrinkage, mora ny mahatonga ireo faritra ireo rehefa avy hihena solidification endrika lavaka, shrinkage porosity, slag mifangaro kilema.
2 Dingan'ny famenoana ny fanariana maty very
Ny kilema fanariana dia miforona amin'ny fotoana fanariana famenoana sy fizotry ny fanamafisana. Amin'ny ankapobeny, ny fotoana famenoana ny castings kely sy antonony dia segondra vitsy monja, mihoatra ny folo segondra na folo segondra, ary ny fotoana famenoana ny castings lehibe dia vita ao anatin'ny minitra vitsivitsy. Tsy mitovy amin'ny fanariana lavaka mahazatra, ny maha-tokana ny famenoana bobongolo amin'ny fanariana epc no tena antony mahatonga ny fananganana kilema.
2.1 Famenoana endrika fanariana epc
Momba ny fizotran'ny famenoana vy vita amin'ny vy very, ny morphologie famenoana vy, manomboka amin'ny vavahady mankany amin'ny fanariana, aorian'ny fantson'ny mpankafy metaly "loza", eo ambanin'ny fiantraikan'ny gravité, ny vy mameno ny sisin-tany midina midina, fa ny ankapobeny. Ny fironana dia mandroso mankany amin'ny lalana lavitra ny vavahady, mandra-pahafeno ny "lavaka". Ny endriky ny sisin-tany amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny metaly sy ny endriny dia mifandraika amin'ny mari-pana amin'ny metaly ranoka, ny toetran'ny fitaovana bika ary ny hafainganam-pandehan'ny famenoana. Raha avo kokoa ny mari-pana amin'ny metaly ranon-javatra, dia kely kokoa ny hakitroky ny endrika ary haingana kokoa ny hafainganam-pandehan'ny famenoana, haingana kokoa ny hafainganam-pandehan'ny metaly ranon-javatra amin'ny ankapobeny. Ho an'ny firaka aluminium tsy misy fanerena ratsy, ny fifandraisana misy eo amin'ny metaly sy ny endrika dia azo zaraina ho modely efatra: fomba fifandraisana, fomba fiasa, fomba fianjerana ary fomba fandraisana anjara.
2.2 Morphologie mikorontana sy vokatry ny fametahana rindrina amin'ny famenoana metaly ranoka
Ao amin'ny dingan'ny famokarana very bobongolo fanariana, ny maina fasika bobongolo dia tightened amin'ny fampiharana ny ratsy fanerena ny maina fasika bobongolo nandritra ny fanariana dingana, ka ny bobongolo dia manana hery sy stiffness ampy hanohitra ny fiantraikany sy ny buoyancy ny ranon-javatra metaly, ka mba hiantohana ny fahamendrehana sy ny fahombiazan'ny bobongolo amin'ny dingana manontolo amin'ny fanariana sy ny fanamafisana, ary hahazoana ny rafitra feno amin'ny fanariana. Ny fanerena ratsy dia mamela ny mainty firaka castings ho very fomba. Ny lasitra fasika maina dia manana tanjaka sy stiffness ampy mba ahafahan'ny dingan'ny fanariana hirosoana tsy hampitombo ny haavon'ny boaty fasika.
3 Ny loharanon'ny fampidirana amin'ny metaly ranoka
Ny fampidirana sy ny entona ao amin'ny loharano vy ranoka dia misy lafin-javatra maro, toy ny endriky ny vokatra pyrolysis sisa tavela amin'ny entona sy ny entona, ny fizotran'ny fandoroana vy amin'ny pulp sy ny entona, ary ny pulp dia miforona amin'ny alàlan'ny oxidation ny oxide metaly, misy entona sasany. amin'ny hafanana avo amin'ny ranon-javatra metaly mba levona, ary ny potipoti-javatra ao anaty lavaka voaisy tombo-kase ", sns.
Fomba 4 hampihenana ny fampidirana amin'ny very die castings
4.1 Ampidino ny fampidirana tany am-boalohany amin'ny metaly ranoka
Ny fampihenana ny fampidirana amin'ny metaly ranon-javatra alohan'ny fandrarahana no fomba lehibe hampihenana ny fampidirana ao amin'ny ampahany fanariana vy. Misy fomba maro hanadiovana ny vy ranoka. Ny mpanadio ranon-javatra metaly dia azo ampiasaina, izany hoe azo ampiasaina ny akora mpanangom-bokatra. Ny fampidirana ireo potikely kely kokoa dia azo amboarina amin'ny ampahany lehibe kokoa amin'ny fampidirana amin'ny alàlan'ny fiankinan-doha amin'ny adsorption ny fampidirana mba hamoronana singa fampidirana lehibe kokoa, izay mahasoa amin'ny fanatsarana ny toe-piainana mavitrika amin'ny mitsingevana azy.
4.2 Ny fepetra momba ny dingana dia tokony horaisina mba hampihenana ny fampidirana ao anaty ranon-javatra metaly ary hanamafisana ny fanesorana ny fampidirana.
(1) Ara-drariny famolavolana rafitra riser fandatsahana: araka izay azo atao ny mampiasa latsaky ny iray boaty fanariana, araka izay azo atao mba hampihenana ny fotoana ny ranon-javatra metaly ao amin'ny rafitra fandatsahana, izany hoe, mba hampihenana na hanafoana ny mpihazakazaka; Ny fanariana maromaro ao anaty boaty iray dia tsy maintsy hahatonga ny rafitra fandatsahana ho lava loatra. Rehefa mandalo ny rafitra fandatsahana ny ranon-javatra, dia mora ny mamokatra korontana sy splash ao amin'ny multi-miondrika sy miovaova fizarana fantsona ny rafitra fandatsahana, izay mampihena ny mari-pana ny metaly ranoka, dia mitarika ho amin'ny oxygenation ny ranon-javatra metaly, scour ny sisin'ny rindrin'ny spate ary mampitombo ny inclusions tany am-boalohany ao amin'ny ranon-javatra metaly.
(2) Ny fampihenana mety amin'ny fanerena ratsy: ny fanerena ratsy dia antony lehibe hampitombo ny korontana vokatry ny famenoana ranon-javatra metaly. Ny fitomboan'ny fikorontanana dia mahatonga ny metaly mitsonika hanasa ny rafitra vavahady sy ny rindrin'ny "lava", ka miteraka fiparitahana sy fananganana vortices izay mora tafiditra amin'ny fampidirana sy ny entona.
4.3 Misoroka ny fako ivelany tsy hiditra ao anaty lavaka
(1) fisehoana "lava-bato" sy maina fasika tombo-kase: fandatsahana rafitra endrika sy ny fanariana endrika sy maina fasika eo anelanelan'ny tombo-kase dia tsy mora ny hahatonga maina fasika ao amin'ny "lava", famehezana indrindra dia miankina amin'ny coating, coating fampisehoana mba hihaona ny fepetra takiana. , ny hatevin'ny fanamiana, indrindra amin'ny endriky ny zoro anatiny, mba hisorohana ny fanangonana coating matevina loatra vokatry ny vaky na mianjera.
(2) mampihena ny endrika mifamatotra tonon-taolana: be loatra endrika fatorana banga, mora ny miteraka fiovana be loatra amin'ny habetsahan'ny lakaoly ampiasaina ao amin'ny banga, ka miteraka adhesive tonon-taolana convex na concave.
(3) araka izay azo atao ny mampiasa tsara mason-tsivana lasitra fanariana endrika sy ny fanariana endrika endrika: raha noho ny famokarana batch dia afaka mampiasa ny lovia fanapahana endrika ihany, ny endriky ny ambonin'ny dia tokony ho tsara tsaboina, voalambolambo sy madio, rehefa ilaina. , miaraka amin'ny famenoana famenoana hanesorana ireo banga sy lavaka eo an-toerana.
Fotoana fandefasana: Sep-14-2021